The Coral Restoration Consortium (CRC) dia fikambanan'ny fampiharana ahitana mpahay siansa, manampahaizana, mpitsabo amin'ny famerenana ny vatohara, ary mpanabe hitokona ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina mba ho tafavoaka velona amin'ny taonjato 21 sy any aoriana.
Ny iraka avy amin'ny CRC dia ny hamporisika ny fiaraha-miasa sy ny fampitaovana teknolojia eo amin'ireo mpandray anjara, ary hanamorana ny fahaizan'ny siansa sy azo ampiharina amin'ny fampisehoana fa ny famerenana amin'ny laoniny dia afaka miteraka vokatra manan-danja amin'ny alàlan'ny môtô manan-danja amin'ny vatohara amin'ny anjara asany amin'ny fiarovana ny morontsiraka, fanohanana ny jono, ary ny fitaovana ara-toekarena ho an'ny morontsiraka. fiaraha-monina.
Mba hanampiana amin'ny fampitomboana ny refy sy ny fahombiazan'ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara, ny Coral Restauration Consortium (CRC) dia hifantoka amin'ireto laharam-pahamehana manaraka ireto mandritra ny telo ka hatramin'ny dimy taona manaraka. Ho an'ny laharam-pahamehana tsirairay, ny vondrona miasa voatokana dia natsangana hamolavola drafitra hetsika mifantoka amin'ny vahaolana ary hanampy amin'ny fametrahana fomba fitantanana tsara indrindra.
Fantaro bebe kokoa momba ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Restoration Consortium.